China Shaohong 4L, Multi-function Electric Cooker, Pot Pot Pressure Pot, Touch iqhosha, Stain-Resistant Slow Cooker, Steamer, Sauté, Rice Cooker, Cake Maker, Iqanda Cooker, iSterilizer kunye nokuzifudumeza ngePaneli enkulu yeLCD, 11+ izixhobo, mthubi . Abavelisi be-AX-971DT kunye nabathengisi | UShao Hong
Umpheki woxinzelelo lombane u-Shaohong unezinto ezininzi ezilungiselelwe kwangaphambili: Iinkuku, isuphu, iimbotyi / itshili, isidudu, ikhekhe, iqanda, iSlow Cook, irayisi, uxinzelelo lokupheka, isosi, umphunga, kunye neyogathi, nqakraza nje iqhosha ukugqibezela isidlo esimnandi nesinempilo.
Uxinzelelo lokupheka ngaphakathi olukhawulezileyo lwangaphakathi lwenziwe nge-teflon ekumgangatho wokutya, Ayisiyonto yokutyabeka ngaphandle kwemichiza kuphela kodwa kunye neminwe. Umaleko we-3 ongezantsi, womelele kwaye ubushushu busasazwe. Sebenzisa izizukulwane ezithathu zakutshanje zetekhnoloji yokupheka kunye namandla aphezulu e-1000W, xa kuthelekiswa nesantya sokupheka esonyuswe nge-70%, kungagcina ngcono isondlo ekutyeni.
Imbiza yangaphakathi inokuchithwa nge-ergonomically, kulula ukuyicoca kunye ne-dishwasher-ekhuselekileyo. Iimbiza zethu zikunika ithuba lokungena ngexesha lokupheka, unokuhlengahlengisa uxinzelelo kunye nenqanaba lokungcamla ukuze uhlangabezane neemfuno zakho. Ukongeza, umboniso omkhulu weLCD ulungelelwaniso oluphezulu oluzenzekelayo, inkqubela phambili yokupheka, ubushushu bokupheka obubonakalayo, kunye nomsebenzi wokucima ibhiphu.
Ingcinezelo yokupheka koxinzelelo i-Shaohong ikubonelela ngeentlobo ezininzi zezincedisi, kubandakanya incwadi yeRisipe, indebe yokulinganisa iRice Paddle, iLogo yesuphu, iigloves × 2, iiklip zokutya, iPad, i-egg steamer, i-Stainless Steel Steamer, kunye neRing Ring. Uxinzelelo lokupheka kunye nomgangatho ophezulu kunye neempawu ezintle. Iimpawu ze-10 ezakhelwe ngaphakathi kukhuseleko. Yonke imisebenzi yokhuselo ivavanyiwe kunye nokhuseleko.
Ukupheka koxinzelelo lombane ngo-Shaohong kuthembekile Xa kuthelekiswa nenye iwaranti yonyaka omnye, sinokukunika iminyaka emi-2. Iiyure eziyi-7/24 zenkonzo yeqela emva kokuthengisa, ukuba ufumana naziphi na iingxaki, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
◎ Ukupheka irayisi, isidudu, isuphu kunye nekhari njlnjl Kuza isixhobo esishukumisayo esizenzekelayo.
Iphaneli yokulawula yokubamba enobuchule.
Isibali sexesha ledijithali kunye nokuseta ubushushu ngomboniso we-LED
Ifestile yeglasi engabonakaliyo yokubukela inkqubela phambili yokupheka.
Pot I-4L engenantonga yokukhula enganyangekiyo embizeni yangaphakathi.
Isikhongozelo se-1x20ft: 624pcs
Isikhongozelo se-1x40ft: 1296 iiPC
Isikhongozelo se-1x40HQ: 1440 iiPC
Egqithileyo I-Shaohong 4L, i-Multi-function Electric Cooker, i-Pot yongcinezelo yedijithali, iqhosha le-Elektroniki, i-Stow-Resistant Slow Cooker, i-Steamer, i-Sauté, i-Rice Cooker, i-Cake Maker, i-Egg Cooker, i-Sterilizer kunye nokuzifudumeza ngePaneli enkulu ye-LCD, izixhobo ze-11 +, tyheli. I-AX-971D
Okulandelayo: I-Shaohong Air Fryer, i-Countertop Toaster Oven foodie grill, i-Convection Oven nge-Glass Bowl, i-Air frier kunye ne-360 ° ye-Anti-scalding Holder Holder, elula ukuyisebenzisa kunye necocekileyo, i-11Qt White
UShaohong 4L, uMphathi weMisebenzi emininzi yoMbane, e ...